मोटी के”टीसंग बिहे गर्दा फाइदै फाइदा हेर्नुहोस पूरा जानकारी – List Khabar
Home / रोचक / मोटी के”टीसंग बिहे गर्दा फाइदै फाइदा हेर्नुहोस पूरा जानकारी
मोटी के”टीसंग बिहे गर्दा फाइदै फाइदा हेर्नुहोस पूरा जानकारी
admin December 21, 2021 रोचक Leaveacomment 99 Views
विवाह एक सास्वत सत्य हो । @विवाहको फल खाने पनि पछुताउँछ नखाने त झन नपछुताउने कुरै भएन । योबीचमा विवाहलाई लिएर अनेक मान्यता रहँदै आएका छन् ।
Previous कोभिडको नयाँ लहर ओमिक्रोन देखिएपछि हुनेभए सबै विद्यालय बन्द?
Next किन गर्छन? कुकुर’ले खुला ठाँऊमा स म्भो ग ? यस्तो छ कारण …